माइती मुलुक भारत हिँडेकी सरिता गिरीलाई सीमाबाटै धुरी धुरु रुवाउदै फ’र्काइयो,,हेर्नुहोस! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
माइती मुलुक भारत हिँडेकी सरिता गिरीलाई सीमाबाटै धुरी धुरु रुवाउदै फ’र्काइयो,,हेर्नुहोस!
काठमाडौं । आफ्नो माइती देश भारत जान हिँडेकी जनता समाजवादी पार्टीकी सां’सद सरिता गि’रीलाई नेपाल–भारत दुवैतर्फका सुरक्षाकर्मीले दशगजा क्षेत्रबाट फर्काइदिएका छन् । कोरोना भा’इरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल र भारतलगायत विभिन्न देशमा यतिबेला लक’डाउन जारी छ ।
भारतले नेपाली भूमि अति’क्रण गरिरहेको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समे’टेर नेपालले आफ्नाे भूमि फिर्ता लिन उक्त क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा तयार गर्दा नेपालको पक्ष नभइ भारतको पक्षमा लाग्दा अहिले उनी देश र जनताबाट एक्ली भएकी छन् । यसै कारण सांसद गिरी सिराहाको ठाडी ना’काबाट मंगलबार भारतको बि’हारतर्फ जान लागेकी थिइन् ।
संस”दमा आफ्नो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत नगरिएपछि संविधान संशोधनको दिन बैठक बहिस्कार गरेर हिँडेकी सांसद गिरी गृहजिल्ला सिराहामा पुगेकी थिइन् । सांसद गिरीको माइती बि’हार हो भने घर सिरहाको बस्तिपुरमा पर्छ।
सांसद गिरी कार्यकर्ता भेट्न भन्दै सीमा क्षेत्रमा पुगेको र त्यतै’बाट पारि नगई फर्किएको जानकारी आफूले पाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले जनाएको छ । सिमानामा खटिएका स’शस्त्र प्रहरीका एक अधिकृत अनुसार उनलाई दशगजा नजिकबाट फि’र्ता पठाइएको छ ।
Previous ‘मास्क लगाएर यात्रा गरौँ,सबैले जोर विजोर नियम पालना गरौँ’:ट्राफिक प्रहरी ,,हेर्नुहोस!
Next नेपालको नयाँ नक्सा च्या’त्नुपर्छ,यो कमाउने एजेण्डा हो :तारा बराल(भिडियो सहित),,हेर्नुहोस!